तिथि मेरो पत्रु » सफल महिला वास्तवमा यो सबै सक्नुहुन्छ?
…अथवा आफ्नो सम्बन्ध कमजोर आजको "overachievers" हो?
"तपाईं लामो बाटो आइसकेका छौं, बच्चा,"आज स्त्रीको विकास सराहना एक लोकप्रिय व्यापारिक यसो भन्छ. नभन्दै हामी आइपुगेको छ!
महिला एक दिन र हामी पनि वोट डाली सकेनन् जब उमेर देखि बसे छन्, राजनीतिक ताकतवर गर्न बेवास्ता गर्न.
समेत कर्पोरेट क्षेत्र मा, हामी धेरै नेतृत्व को भूमिका गर्न कर्पोरेट सीढी जानुभयो छन्, अक्सर मानिसहरू हो कि भारी विभाग बजेट र मातहत प्रबन्ध.
यस गर्न हामी अक्सर हाम्रो आफ्नै घरमा पाउनुभयो भन्ने तथ्यलाई थप्न, हाम्रो आफ्नै पैसा कमाउन, र हाम्रो आफ्नै धारणा छ. र गायन समूह शब्दहरू मा, भाग्य सन्तान, "मलाई निर्भर, म यो चाहनुहुन्छ भने। "
वाहवाही दुई! एक धनु लिनुहोस्.
तर, यहाँ व्यापार बन्द छ…
प्रेम मा गुमाउनुपर्ने गर्दा आज सफल महिला व्यापार मा विजेता हुन सक्छ.
अनि यहाँ किन हो.
सुदूर हामी पनि धेरै हामीलाई बोर्डरूम हावी अनुमति गुणहरू को धेरै चिन्न असफल, बेडरूम मा हानि हुन सक्छ. नमस्ते?!
यो स्त्री र पुरुष को युद्धमा, हामी युद्धमा विजेता तर युद्ध गुमाउनुपर्ने छन्?
अथवा, डा शब्दहरू मा. फिल, "कसरी भन्ने workin छ’ लागि '?"
यहाँ यो साकार बिना हामी कहिलेकाहीं हाम्रो पुरुष emasculate कसरी चित्रण चार सामान्य परिदृश्य हो.
सायद तपाईं केही दोषी छौं. मा पढ्नुहोस् र पत्ता.
मानसिकता "यो मेरो बाटो वा राजमार्ग'S"— पक्का, काम संसारमा अख्तियार हामी किराया जसलाई हाम्रो इच्छा गरिदिएको र आफ्नो भुक्तान अनुमति. तर, व्यक्तिगत सम्बन्ध अलग हो. तिनीहरूले साझेदारी जहाँ दुवै दल मानिन्छ छौं’ आवश्यकता र भावना समायोजित छन्, लालनपालन वा उद्धारका छैन भूमिका.
सम्पत्ति नशा—परमेश्वरले आफ्नै पायो कि बच्चा आशीर्वाद. अनि कहिल्यै हामीलाई केही आफ्नो जीवनसाथी हाम्रो भौतिक सम्पत्ति हाम्रो सफलता को गौण हो र हामीलाई विशेष हौं भनेर थाह दिनु, विशेष तर्कको को गर्मी मा. "मेरो घर, मेरो कार, मेरो पैसा। "मेरो वचन!
"म स्त्री मलाई गर्जन सुन्नु हुँ "सिंड्रोम—हाम्रो आफ्नै मुद्रा बनाउन र हाम्रो आफ्नै तरिकाले जातिको लागि प्रदान गर्ने क्षमता भएको देखि, प्रजनन र ग्रहण विकल्प जीवनको दैनिक समीकरण बाहिर गर्न सक्छन् एक्स मानिसहरू, हामीलाई केही मानिसहरू हाम्रो बोली र कामले मा अनावश्यक हो भनेर सन्देश दिइरहेका छन्.
सानो मुद्दाहरूमा ठूलो खडा चाल्नदेखि—शब्दहरू युद्ध लडिरहेको केही महिला शक्ति र महत्व को एक महसूस गर्छ, विद्रोही र परिवर्तन गर्न प्रतिरोधी मानिसहरू छोडेर जबकि.
बलियो सधैं गलत होइन.
तर सन्तुलन अक्सर राम्रो छ.
महिला यो सबै हुन सक्छ?
पक्का, तर कुनै दिएको gotta’ ट्याब तिर्न— जो एक सानो दिन्छु भन्छ र लिन र नै वार्ता कौशल प्रेमी दिदीबहिनी देखि रोजगार9गर्न 5. आखिर, बिली डी विलियम चलचित्र महोगनी मा डायना रस बताउँछ रूपमा, "कसैले बिना सफलता 'को अर्थ nothin साझा गर्न!"